Crosscall Core-T4 the all-terrain tablet [Ongorora] | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 28/03/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 31/03/2021 12:45 | General, Reviews
Isu tinodzokera kuActualidad Gadget ine zvemukati zvaunoda, neyakanaka ongororo kuitira kuti ugone kuzvisarudzira kana zvakakodzera kutenga zvimwe zvigadzirwa, uye panguva ino tinotarisa pamusika unoshamisa kwazvo, wemidziyo Ultra-nemishonga kune ese marudzi enharaunda, usarasikirwa nazvo.
Iyo nyowani inowana patafura yedu yekuongorora Crosscall Core-T4, piritsi rakaomarara kwazvo, izere nenhumbi uye pamusoro pezvese zvinopesana. Tsvaga nesu ndezvipi zvinonyanya kufadza hunhu uye kana zvichikosha kutenga rudzi urwu rwezvigadzirwa zvinotarisana nekupokana nekusimba, iwe unofungei?
Sedzimwe nguva, isu tafunga kuperekedza iyi nyowani yekuongorora nevhidhiyo yauchakwanisa kunakidzwa pane yedu YouTube chiteshi uye inotungamira iyi ongororo. Mariri iwe unowana iyo unboxing iyo Croscall Core-T4 piritsi, pamwe neakateedzana emayedzo chaiwo atinoita isu kuti iwe ugone kuwana zano rezvekuita kwaro zvese, nekuti zviri nyore kwazvo kuzviona nemaziso ako pane kuudzwa nezvazvo. Usakanganwa kunyorera uye kutisiira iyo Kufanana kutibatsira kuti tirambe tichikura.
1 Dhizaini inofungidzirwa kuramba
3 Multimedia chikamu uye makamera
4 Makomborero eCrosscall mudziyo uye kuzvitonga
Dhizaini inofungidzirwa kuramba
Panyaya yekugadzirwa, Croscall ine tambo yakasimba iyo inoita kuti tikwanise kuziva izvo zvigadzirwa zvayo, mune ino nyaya iyo Core-T4 yaisazove shoma, uye ndeyekuti ine mitsara inozivikanwa kwazvo, kunyanya kana tichiienzanisa ne zvimwe zvigadzirwa zvekhamera. Isu tine dhizaini yakavhenganiswa inosanganisira esimbi zvinhu uye zvakare akaomarara uye anochinjika mapurasitiki anotipa kuwedzerwa kudzivirirwa. Neiyi nzira anowana IP68 certification ine mvura inodzivisa kunyudzwa kusvika pa2m kwemaminitsi makumi matatu, pamwe nekuiswa chisimbiso kuzere neguruva.
Weight: 610 gramu
Vipimo: 225 X 135 X 14mm
TENGA iyo itsva Crosscall Core-T4 pamutengo wakanakisa
Kumberi kwatinako Gorilla Girazi 3, izvo zvinotipa anozivikanwa kuramba kurwisa. Sechinobatsira isu tine yakakurumbira furemu uye girazi rakatsetseka. Kudonhedza kwaro bvunzo kunovimbisa kuramba kukwirira kwemamita 1,5 pane kongiri pasi uye nepfungwa kubva kumativi ese. Saizvozvo, kupisa kwakanyanya pakati -25º uye + 50º hakuzokanganisa mashandiro ayo. Uye zvakare, inoshingirira kunaya uye kunyange mvura yemunyu, ichiita kuti ive yakanaka, semuenzaniso, kuti ishandiswe seGPS muchikepe. Nekunze, zvinoita sekunge haina kana chinhu, asi ... chii icho chainogara mukati? Ngatitarisei.
Chimwe chezvinhu chichatishamisa isu zvakanyanya ndeche kurema kwayo kukuru Tichifunga nezve kuumbana kwechigadzirwa, asi tichifunga kuti chakanangana nekutsungirira, hatishamiswe futi.
Kana iri processor, kamwe zvakare tinowana pano pamwe imwe yemapoinzi ayo akashata pamwe neiyo RAM, uye ndizvozvo Crosscall kubhejera pane yekuisa renji ne Qualcomm Snapdragon 450, zvirinani, hongu, ivo havana kubheja paMediaTek. Ndangariro RAM izvo zvinofambidzana neiyi processor ndeye 3GB, kunyangwe isu tisina data chairo parudzi rwendangariro yakashandiswa.
Padanho rekubatanidza isu tine chiteshi DualSIM izvo zvinotibvumidza kushandisa Crosscall T4 seye chete mudziyo. Muchiitiko ichocho tine kubatana 4G LTE iine zvakakwana kufukidza zvinoenderana nekuongorora kwedu. Tine chimwe chikamu chatisiya tatonhora, uye ndizvozvo zvatinazvo Tsika ac WiFi uye Makaralı 4.1.
32GB yekuchengetedza inowedzerwa ne microSD inosvika 512GB
A-GPS, Glonass, Beidou naGalileo
Sechinobatsira, isu tine NFC saka tinogona kushandisa nzira dzisingaenderane dzekubhadhara, pamwe nechiteshi USB-C, iyo yatisina kukwanisa kutora vhidhiyo mumiyedzo yedu. Kune chikamu chayo, isu tine mahedhifoni akabatanidzwa mupakeji uye chiteshi 3,5mm jack.
Multimedia chikamu uye makamera
Tine pani 8 inch IPS LCD neWXGA resolution, zvishoma pamusoro HD uye isina Full HD, chimwe chinhu icho chinofunga nezve saizi yechidzitiro chinonzwisisika. Ehezve, iwo mapaneru anopa yakaringana mwero wekupenya uye nemarongero akanyatsogadziriswa, zvisinei, resolution iri pazasi peFHD mune mudziyo wemutengo uyu inova inopesana. Ruzha rwechikamu charo rwakanaka tichifunga mutauri waro uripazasi. Tenga iyo nemutengo wakanakisa paAmazon kana yakatokugonesa.
Kana ari makamera isu tine 5MP kumberi, zvinopfuura zvakakwana kuti ubate vhidhiyo yekufona munzvimbo yakajairika, uye nekamera yekumashure isu tine 13MP yekushandisa zvishoma, mashandiro acho akaderera mumamiriro akashata emwenje uye ine kamera yakapusa yekushandisa, tinokusiira mimwe mienzaniso.
Tsvaga iyo ruzivo rwekuti inofamba sei pavhidhiyo> BATANIRA KUINSTAGRAM YEDU
Izvo zvakati, iyo multimedia chiitiko chinganzi chakaringana, asi zvakajeka chakafukidzwa nekusava ne stereo kurira uye nekudzika kuderera kwescreen chayo, kunyangwe iine chiyero chakanaka chekupenya uye inogona kunakidzwa panze pasina dambudziko.
Makomborero eCrosscall mudziyo uye kuzvitonga
Mune ino kesi, iyo package inosanganisira iyo X-Blocker yekumashure adapter inoenderana ne Crosscall's proprietary X-Link rinobatanidza rinobva. Tine kusvika kubhatiri re 7.000 mAh pasina chero chakaziviswa kubhadharisa nekukurumidza, inopa zvinopfuura kuzvitonga kuzere kwekushandisa kwese uye kunyangwe kunakirwa nemultimedia zvemukati pasina zvakanyanya matambudziko.
Isu tinosimbisa muchigadzirwa ichi senge mune ese maCrosscalls ayo anoshamisa "asiri-munzira" kugona, Iwe hautombowana chakashomeka uye chakachinjika chishandiso chine vimbiso inopihwa naCroscall. Nekudaro, senguva dzose murudzi urwu rwechigadzirwa isu takanyanyisa kudzora Hardware tichifunga mutengo, isu tinoshaya angangoita FHD resolution pachiratidziro, chengetedzo yakakura kupfuura ingangoita 32GB inoita kunge diki kwazvo uye yakapfupika 3GB ye RAM ndangariro.
Zvakare inosanganisira iyo X-Bhandi: nguva dzose chengeta hwendefa yako padyo. Bhandi repafudzi, iro rakagadzirirwa kugadzirisa iyo CORE-T4 piritsi, zvakare yakagadzirirwa 360 ° inotenderera mubato wakagadzirirwa kuchinjika kune ese mashandisirwo kwenguva uye nekudaro inoderedza chero njodzi yekukuvara. Uye zvakare, nekutenda kune isina-kutsvedza uye yakasungwa tambo, unogona kunyatso kupfeka X-STRAP bhegi repafudzi zuva rese.
Unogona kutenga iyo itsva Crosscall Core-T4 kubva ku519,90 euros pane yayo yepamutemo webhusaiti, kana kutora mukana wekudzikisira kunopihwa paAmazon kwaunogona kuiwana kubva kungori 471 mu IYI BHUKU. Isu tinovimba iwe wakafarira ongororo yedu uye wotisiira chero mibvunzo mubhokisi remashoko, uko kwatichafara kukupindura.
Yakatumirwa pa: 28 March we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 31 March we2021
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Crosscall Core-T4 iyo pese-pevhu piritsi [Kuongorora]